नेपाली फुटबलमा २३ वर्षपछि चमात्कार,कसरी सम्भव भयो ? - Himalayan Kangaroo
नेपाली फुटबलमा २३ वर्षपछि चमात्कार,कसरी सम्भव भयो ?
Posted by Himalayan Kangaroo | ४ फाल्गुन २०७२, मंगलवार ०१:४१ |
काठमाडौं । २३ वर्षपछि नेपालले दक्षिण एसियली खेलकूद साग अन्तर्गत पुरुष तर्फको फुटबलको उपाधि जितेको छ । २३ वर्षपछि उसकै भूमि र समर्थककहरुको बीचमा भारतलाई २–१ गोलले हराउँदै नेपाल यस क्षेत्रको च्याम्पियन बनेको छ ।
नेपालको जीतमा प्रकाश बूढाथोकी र नवयुग श्रेष्ठ हिरो सावित भए । मध्यान्तर अघिसम्म १–० ले पछि परेको नेपालले मध्यान्तरपछि स्थितिलाई उल्ट्याउँदै उपाधि माथि कब्जा मात्र गरेर विभिन्न माध्यमहरुबाट प्रत्यक्ष खेल हेरिरहेका दर्शकहरुको मन पनि जित्न सफल भए । अब नेपाली फुटबलमा साँच्चिकै नवयुगको शुरुवात भएको उनीहरुको बुझाइ छ ।
फाइनल प्रतिस्पर्धाको खेलमा नेपालले अधिकांश समय बल आफ्नो नियन्त्रणमा राखेको थियो । यस्तै नेपाली खेलाडीहरुको स्टामिना,फूर्तिलोपन र खेलका लागि आवश्यक कला र ड्रामा सबैमा नेपाली युवा खेलाडीहरु निपूर्ण रहेको दर्शकहरुले पाए ।
कसरी चमात्कार भयो ?
काठमाडौंमा सम्पन्न अण्डर १६ फुटबल प्रतियोगीताबाट पुनः शुरु भएको नेपाली फुटबलको विजयी यात्रा पछिल्लो समयमा साग फुटबलसम्म आइपुगेको हो । यसलाई चमात्कार नै मान्न सकिन्छ,खेल विश्लेषकहरु भन्छन् । तर यसमा प्रहरीले केही समय अगाडि गरेको स्ट्रीङ अपरेशन पनि महत्वपूर्ण कडीका रुपमा रहेको केहीको बुझाइ छ । म्याच फिक्सिङको अभियोगमा पाँच जना खेलाडीमाथि प्रहरीले कारवाही अगाडि बढाएको थियो । त्यो कारवाहीसँगै नेपाली फुटबल क्षेत्र निकै तरंगित मात्र भएन,उथलपुथल नै भयो । चार जना राष्ट्रिय खेलाडी कारवाहीमा परेपछि उनीहरुको विकल्प खोजिन थाल्यो र त्यहीक्रममा नवयुगहरुको उदय सम्भव भयो ।
त्यसैले साग फुटवलको फाइनलमा नेपालले भारतलाई हराएसँगै महानगरीय अपराध महाशाखाका एसएसपी सर्वेन्द्र खनाललाई पनि बधाइको ओइरो लागेको छ ।
स्वदेशका विभिन्न क्षेत्रका मानिसहरु, अमेरिका र बेलायतबाट धेरै फोन र एसएमएस आएको उनले बताए । म्याच फिक्सिङको आरोपमा उनले राष्ट्रिय टोलीका कप्तानसहित सागर थापासहितका ५ जना खेलाडीलाई नियन्त्रणमा लिएका थिए ।
उनले नेपाल र भारतबीचको खेल उनले लाजिम्पाटको कर्नर क्याफेमा बसेर हेरेका थिए ।
’नेपालले जित्यो निकै गर्व लाएर आएको छ’, खनालले भने ’देशको स्वाभिमान पनि जितसँगै चौडा भएको छ। खेलाडीले चाहे, मिहनेत गरे के हुदैन रैछ भन्ने कुराको पनि पुष्टि भएको छ,’ खनालले भने ।
Previousमुलुकभर प्रहरीको नयाँ एकाइको माग बढ्दो,बजेट र जनशक्तिको अभाव
Nextनेपाली टोलीलाई बधाइ र पुरस्कारको ओइरो
५ भाद्र २०७३, आईतवार ०२:०९
अर्जेन्टिनालाई हराउँदै फ्रान्स विश्वकपको क्वार्टरफाइनलमा,वल्र्डकप उचाल्ने मेस्सीको सपना अधुरै
१६ असार २०७५, शनिबार १६:०१